Daawo Muuqaal: Cadeymo Muujinaya in Dowlada Federaalka Soomaaliya ay Dowlada Puntland ugu deeqday Malaayiin Dollar iyo lunsi lacag oo lasoo bandhigay! | kowtharmedia.com
Home MUUQAAL Daawo Muuqaal: Cadeymo Muujinaya in Dowlada Federaalka Soomaaliya ay Dowlada Puntland ugu deeqday Malaayiin Dollar iyo lunsi lacag oo lasoo bandhigay!
Daawo Muuqaal: Cadeymo Muujinaya in Dowlada Federaalka Soomaaliya ay Dowlada Puntland ugu deeqday Malaayiin Dollar iyo lunsi lacag oo lasoo bandhigay!
Nov 01, 2016MUUQAAL, WARAR
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Maamulka Puntland ayaa magaalada Garawe kusoo bandhigay cadeymo muujinaya in Dowlada Federaalka Soomaaliya ku wareejisay Maamulka Puntland lacag ka badan todobo Milyan oo Dollar kadibna laga waayay qasnada Maamulka Putland tasoo lagu tuhmaaya M/ Cabdiwaligaas.
Xildhibaan Cismaan Diiriye Kulane oo Kamid ah xildhibaanada Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa soo bandhigay sida Dowlada Federaalka Soomaaliya u qeybisay lacago deeq ah oo gaarayay 20 milyan oo Dollar oo loo qeybiyay maamul goboleedyada, waxaana lacagtan inta ugu badan la siiyay Puntland
Halkan ka Daawo Cadeymaha uu Xildhibaanka soo bandhigay iyo baaq uu udiray Madaxweynaha Xasan sheeq Maxamuud
Previous PostMaamulada Galmudug iyo Puntland oo Heshiis wada gaadhay Warbixin Cusub! Next PostDAAWO: Xaalada QANDALA oo kacsan, Diyaarado dagaal iyo Maraakiibta NATO oo Dul yimid & Shacabkii oo ka yaacay mashruucaas!!